Fitsidihana 2.0: Mitsidika an’i India Amin’ny Alalan’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Avrily 2016 9:32 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 한국어, Ελληνικά, 繁體中文, Português, Français, English
Sary: The Modern Monk tao amin'ny Flickr (CC-BY-NC license)
Toerana malaza manerantany i India, nahitana fahatongavan'ny vahiny 11 tapitrisa tamin'ny 2015. Raha ny marina, toerana “tokony handehanana” ara-tantara i India. Na dia ny Sufi mysitika Jalaluddin Rumi tamin'ny taonjato faha-13 aza nilaza fa toerana mendrika andehanana noho ny ara-panahy goavana i India.
Mafy tsy nisy toy izany ankehitriny ny faniriana handeha sy hijery an'i India, ary manamora izany ho an'ny Indiana sy ny tsy Indiana hitsidihana ny firenena midadasika ireo bilaogera tsy mitsaha-mitombo miaraka amin'ny fivoarana ara-teknolojia.
Antony lehibe mahatonga ny fitsidihana ho tontosa ny teknolojia. Ao India, ohatra, mety tsy ho tsara foana ny foto-drafitrasa ho an'ny vahoaka, ny fandaharam-potoanan'ny fitsidihana sy ny tolotra fanohanana toy ny fitsaboana na ny fiarovana. Anjaran'ny mpitsidika no manomana tsara kokoa sy mandamina ny diany. Amin'izany, mitàna toerana lehibe ny teknolojia, ary indrindra ny revolision'ny media sosialy.
Hevero ny tranga vao haingana mahakasika ny lalamby Indiana. Vehivavy iray hiditra anaty lamasinina no niharan'ny antsojay nataon'ny lehilahy iray. Tsy mety nahita izay polisin'ny lalamby teo akaiky teo, nandefa sioka mivantana tany amin'ny Minisiteran'ny Lalamby Indiana izy.
. @RailMinIndia azafady, mila famonjena ato amin'ny fiaran-dalambe laharana 18030, mpandeha lehilahy iray miherisetra amiko ato shegaon, ao anaty fiaran-dalamby ao ary raiki-tahotra aho
Nampandre ny Mpitandro ny Filaminan'ny Lalamby Ny Ministeran'ny Lalamby, ka niditra tao anaty fiaran-dalamby tamin'ny fiantsonana manaraka ireo polisy mba hitondra ilay lehilahy any an-kafa.
Tsy ny olan'ny fiarovana ihany no endrika hitadiavan'ny olona fanampiana amin'ny tranonkala. Tany somary midadasika manana tsangambato, toerana manan-tantara sy toeram-pizahan-tany maromaro i India. Nandrakitra toerana 3.686 ao India ao amin'ny lisitry ny tontolo iainana ny sampan'ny fanadihadiana arkeolojika ao amin'ny firenena. Na izany aza, ankoatra ireo toerana malaza, mety ho fitsidihana any amin'ny tsy fantatra ny fitsidihana toerana maro hafa. Hita fa nivoatra tokoa ny toe-draharaha tao anatin'ny folo taona farany, saingy mbola marobe ireo pitsopitsony mila apetraka mba ho traikefa mirindra ny fitsidihana.
Nahatonga ireo bilaogera nanome soso-kevitra sy toro-hevitra momba ny fitsidihana sy mampiseho ireo toerana tsy dia fantatra ao India izany fahabangana izany. Neelima Vallangi, ohatra, mandany ny ankamaroan'ny fotoanany amin'ny fitsidihana sy famakafakana ireo toerana hafa kely (tsy dia fantatra) isan-karazany ao amin'ny zana-kaontinanta. Matetika mifantoka amin'ny traikefa nahafinaritra sy ny hakanton'ny toerana ny lahatsoratra nosoratany, fa tsy momba ny fomba fitsidihana na ny safidy ijanonana.
Atombohy amin'ny famakiana lahatsorata momba ny “Paradisa antsoina hoe Kashmir” ny Alatsinainao.
Toa tsy misahirana amin'ny filaminana na mampiroandroana ny tanora Indiana fa liana kokoa amin'ny fianjoriana sy ny fitsidihana. Raiso ny ohatr'i Dhruv Dholakia, Izay nanao fitsidihana nandritra ny 14 volana manodidina an'i India tamin'ny môtô. Nahoana? Manazava ao amin'ny pejy Facebook-ny, izay itantarany ny toerana notsidihany izy:
Nahoana no dia lavabe tahaka izany? Ny antony lehibe tamin'izany dia ny Junoon (teny Urdu midika hoe hadalana). Ny Junoon ho an'ny diako dia nanomboka tamin'ny fahazazana ary mitohy toy ny hery mitarika ny fiainako. Manana namana mpitondra môtô aho izay nanao fitsidihana an'i India tamin'ny arabe roa alina kilometatra tao anatin'ny roa volana sy tapany monja. Izany hoe eo ho eo amin'ny dimam-polo sy roan-jato kilaometatra isan'andro eo. Miverimberina isan'andro. Inona avy ny toerana hitany? Ho ahy, kely ny efatra ambin'ny folo volana mba hanitsahana ny fanjakana rehetra.
Ao amin'ny lahatsary navoakan'i Nikita Rustagi, mizara ny zavatra niainany tao amin'ny The India Bike Week i Dhruv :
Nahazo tosika lehibe avy amin'ny praiministra ao aminny firenena ny fitsidihana ao India, satria indraindray izy mangataka amin'ny Indiana mba handefa sioka momba ny toerana ao amin'ny firenena. Matetika mahazo valinteny an-jatony maro izany sioka izany izay azo ampiasaina ho tahiry tolo-kevitra ho an'ireo mpitsidika liana.
Tohizo hatrany ny fizarana ny sarin'ny #IncredibleIndia (India Mahatalanjona). Atambatra amin'ny endrika raki-tsary ao amin'ny pejy Facebook-ko ireo sary ireo.
Manolotra zavatra marobe manomboka amin'ny tolotra tapakila sy famandrihana hotely hatramin'ny fanofana fiara sy mpikarakara ny toerana aleha ireo fampiharana marobe . Maro amin'ireo fanadihadiana, fanamarihana sy hevitra ifarimbonan'ny olona ho fanampiana ny mpiserasera vaovao no manome safidy sy manome vahaolana amin'ny olana iraisana. India Mike, ohatra, dia sehatra ahafahan'ny mpitsidika mizara ny traikefan'izy ireo sy manontany ny toerana sy ny fitsidihana azo isafidianana.
Matetika ny fitsidihana any India dia mety ho amin'ny tsara, ny ratsy sy ny tsy ampoizina. Saingy miaraka amin'ny fanampiana kely avy amin'ny Twitter, Facebook sy ny sisa amin'ny aterineto, maro amin'ireo mpitsidika no mahavita manamaro ny tsara, mampihena ny ratsy, ary mankafy ny tsy ampoizina.